China Galvanized simbi waya tambo Steel Core 6*7+IWS 6*19+IWRC fekitari nevagadziri |Bangyi
Galvanized simbi waya tambo Steel Core 6*7+IWS 6*19+IWRC
Mhando dzakajairika ndeye 1 × 7, 7 × 7, 1 × 19,7 × 19,19 × 7 uye 7 × 37 etc. Muchigadzirwa chekubata michina, tambo dzesimbi dzesimbi dzinoshandiswa kusimudza, kudhonza, tensioning uye kutakura.Tambo yesimbi ine simba rakakura, huremu huremu, basa rakatsiga, hazvisi nyore kutyora tambo yese kamwe kamwe, uye basa rakavimbika.
Nhanganyaya yeWaya Rope
Iyo tambo yesimbi tambo ihelical simbi waya bundle iyo yakamonereka pamwe chete maererano nemimwe mitemo yesimbi waya ine mechanical properties uye geometric dimensions inosangana nezvinodiwa.
Pane zvinhu zvitatu zvakakosha izvo tambo dzewaya dzinoumbwa: waya filaments, tambo,uye cores.
Isu tinogadzira tambo yetambo nekutora filaments, kumonyorora kana kuruka pamwe chetekuita tambo, uye wobva waimoneredza ichitenderedza pakati.Nekuda kweiyi tambo yakawandaconfiguration, tambo yewaya inowanzonziwo tambo yakasungwa.
Chikamu chekutanga, iyo filaments, inotonhora inodhonzwa tsvimbo dzesimbi zvinhu zvakasiyana, asizvishoma dhayamita.
Chikamu chechipiri, shinda, inogona kuve yega yega shoma sembiri kana yakawanda segumi nemaviri filaments.
Chikamu chekupedzisira, musimboti, ndicho chinhu chepakati panoputirwa tambo;
Thebasa guru retambo core kutsigira tambo yesimbi kuti iwane yakagadzikana muchinjikwa-chikamu chechimiro.Iyo tambo yepakati inosanganisira simbi core uye fiber core, uye fibermusimboti unosanganisira yakasikwa fiber core uye synthetic fiber core.
Tambo yewaya inoda kutakura chiito chekuchinjanisa mutoro panguva yekushandisa maitiro, uye ayoshandisa kushanda kunonyanya kutsanangurwa nemagetsi emagetsi esimbi waya, iyomamiriro epamusoro etambo yesimbi uye chimiro chetambo yetambo yesimbi.
Zvakapfuura: Purasitiki yakavharwa nesimbi waya tambo 3mm 4mm 5mm PVC/PU/NYLON yakavharidzirwa nesimbi waya waya
Zvinotevera: Fiber musimboti 6×7+FC 6×19+FC 6×12+FC Galvanized Steel tambo
Kupisa Dip Galvanized Steel Wire
Zinc Yakavharwa Steel Wire
Fiber musimboti 6×7+FC 6×19+FC 6×12+...
Galvanized waya tambo 7X7 simbi waya tambo
tambo yokusvetuka isina tambo, svetuka tambo tenga, nyanzvi yekusvetuka tambo, bata kusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, kugwinya kusvetuka tambo,